Muxuu ka yiri Frank Lampard guuldarradii kooxdiisa Chelsea ka soo gaartay Tottenham Hotspur?? – Gool FM
(London) 30 Sebt 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard, ayaa sharaxaad ka bixiyay sababihii ka dambeeysay guuldaradii Blues ka soo gaartay xalay naadiga Tottenham Hotspur kulankii xiisaha lahaa ee tartanka Carabao Cup.
Chelsea ayaa ka hartay tartanka Carabao Cup, kaddib markii ay kooxda Tottenham rigoore 5-4 ku garaacday naadiga Blues xilli 90-kii daqiiqo ee ciyaarta la isku mari waayay barbaro 1-1 ah.
Haddaba tababare Frank Lampard, ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna sharaxaad ka bixiyay sababta ka dambeysay guuldarradan soo gaartay, wuxuuna yiri:
“Wax walba wey ka dhici karaa rigooreyaasha, waxaad dooneysaa inaad ka sii mid ahaato tartamadaan, dabcan”.
“Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aan jecleystay inta ay ciyaarta socotay”.
“Waxaan xakameynay qeybtii hore, laakiin ciyaarta ayaa isbadashay”.
“Waxaa jira isbadal cad oo dhanka farsamada ee kooxda Tottenham ah, anagana waxaan u baahanay inaan ka fiicnaano arrintaas”.
“Si fiican ayaan uga jawaab celin karnay, haddii aan dhalin laheen goolka labaad, maadaama aan ciyaarta ku hoggaamineynay gool, isla markaana aan noqon laheyn kuwo aad u fiican, dabcan taasi wey imaan laheyd”.
“Waxaan u muuqanay kuwo daalan dhamaadkii ciyaarta, taasoo la fahmi karo marka loo eego halka aan joognay”.